MMPandora-K – MM Pandora
“Traveler” Season2မှာ ပါဝင်လာမယ့် Ong Seong Wu, Kang Ha Neul နဲ့ Ahn Jae Hong
October 18, 2019 Phyo Phyo0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] “Traveler” Season2မှာ ပါဝင်လာမယ့် Ong Seong Wu, Kang Ha Neul နဲ့ Ahn Jae Hong JTBC ရဲ့ “Traveler” Season2မှာ ဆိုရင် Ong Seong Wu, Kang Ha Neul နဲ့ Ahn Jae Hong တို့ ပါဝင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ October 17 ရက်နေ့မှာ JTBC က Kang Ha Neul, Ahn Jae Hong နဲ့ Ong Seong Wu တို့က ဒီ show …. Read More
Kim Do Wan က Ong Seong Wu နဲ့ ပက်သက်ပြီး “Moments Of 18” က အကြောင်းပြောပြခဲ့
[Zawgyi] Kim Do Wan က Ong Seong Wu နဲ့ ပက်သက်ပြီး “Moments Of 18” က အကြောင်းပြောပြခဲ့ Kim Do Wan က interview တစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး JTBC ရဲ့ “Moments of 18,” က သူ့ role model အကြောင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။ Ong Seong Wu နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတာ ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာ မေးတော့ Kim Do Wan က Seongwu က ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပြီး လူတွေကို ဂရုစိုက်တတ်ကြောင်း၊ group chatroom ထဲမှာတောင် လူတိုင်းနဲ့ …. Read More
“Love Shot” သီချင်းက EXO သီချင်းတွေထဲမှာ 200 Million ပြည့်တာ အမြန်ဆုံးဖြစ်
October 17, 2019 Phyo Phyo0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] “Love Shot” သီချင်းက EXO သီချင်းတွေထဲမှာ 200 Million ပြည့်တာ အမြန်ဆုံးဖြစ် EXO က YouTube မှာ ဆိုရင် 200 Million ပြည့်တဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးထဲကမှ “Love Shot” သီချင်းက 200 Million ပြည့်တာ အမြန်ဆုံးဖြစ်တာပါ။ အတိအကျ အနေနဲ့ ဆိုရင် October 15 ရက်နေ့5p.m. KST မှာ “Love Shot”က 200 million view ကျော်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ “Love Shot” က EXO ရဲ့ ၆ပုဒ်မြောက် အမြန်ဆုံး သီချင်းဖြစ်ပြီး 200 million view ပြည့်ပြီးသား …. Read More
Sulli အတွက် ရေးထားခဲ့တဲ့ IU ရဲ့ “Peach” သီချင်း
[Zawgyi] Sulli အတွက် ရေးထားခဲ့တဲ့ IU ရဲ့ “Peach” သီချင်း “Peach” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက IU ရဲ့ 2012 album ဖြစ်တဲ့ “The Spring of Twenty,” ထဲမှာ Sulli အတွက် ရည်ညွှန်းပြီး ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေး ရှိနေခဲ့တာ သိကြမှာပါ။ ဒီသီချင်းလေး ထွက်တုန်းက ဆိုရင် IU က ဒီသီချင်းကို ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ Sulli အပေါ် အမြင်လေးကို သူမကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ခဲ့တာပါ။ Sulli ကလည်း MBC’s “Radio Star” 2013 မှာ ပရိသတ်တွေက သူမကို‘Peach,’လို့ ခေါ်ကြပြီး သီချင်းထွက်လာတော့ Sulliက IU …. Read More
EXO’s D.O. ကို လွမ်းရင် နားထောင်ရမယ့် သီချင်း ၁၀ ပုဒ်
October 15, 2019 Phyo Phyo0 commentsMMPandora-K
[Zawgyi] EXO’s D.O. ကို လွမ်းရင် နားထောင်ရမယ့် သီချင်း ၁၀ ပုဒ် EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ဖြစ်တဲ့ Doh Kyungsoo က အခုမှာ စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသံအေးအေး vocal မြင့်မြင့် ကို လွမ်းနေကြတဲ့ သူတွေ အတွက် ပြန်နားထောင်ဖို့ သီချင်းလေးတွေပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ သူ့ ဆရာ Yoo Young Jin နဲ့ D.O. ရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်း “Tell Me (What Is Love)”ပါ။ သူ တစ်ယောက်တည်းရဲ့ live performance လည်း ရှိတာမို့ လွမ်းနေသူတွေအတွက် …. Read More
[Zawgyi] EXO အဖွဲ့ဝင်​ Lay / Zhang Yi Xing ရဲ့ ​မွေး​နေ့ ​အောက်​တိုဘာလ ၇ ရက်​​နေ့​လေးက​တော့ legend တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့ EXO’s Lay ရဲ့ ​မွေး​နေ့ပါ။ Yixingက producer, singer, trainer, brand ambassador, dancer, song writter နဲ့ actor ပါ။ ဒါ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေက October7ရက်​​နေ့ မတိုင်​ခင်​ ညကတည်းက Twitter မှာ hashtag ဖြစ်​တဲ့ #HoneyLayDay ဆိုပြီး သူ့​မွေး​နေ့အတွက်​ trend​ပေးပြီး ဂုဏ်​ပြုတာက ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမမး နံပါတ်​တစ်​​နေရာ ​ရောက်​ရှိခဲ့ပါတယ်​။ …. Read More
ဂီတ ပိုင်းမှာသာ မက Brands ​တွေရဲ့ Ambassador ​တွေ ဖြစ်​​နေတဲ့ EXO
[ Zawgyi Version ] ဂီတ ပိုင်းမှာသာ မက Brands ​တွေရဲ့ Ambassador ​တွေ ဖြစ်​​နေတဲ့ EXO KPOP မှာသာမက fashion magazine ​တွေရဲ့ မျက်​နှာစာမှာပါ EXO က ထိပ်​ဆုံးမှာပါပဲ။ EXO member ​တွေက fashion industry ထဲမှာပါ မယုံနိူင်​​လောက်​​အောင်​ brand ​တွေရဲ့ တရားဝင်​ ambassador ​တွေပါ။ Chanyeol က Tommy Hilgifer ရဲ့ ‘TOMMY BOY’ အတွက်​ ပထမဆုံး idol ဖြစ်​ပါတယ်​။ Baekhyun က​တော့ PRIVÉ ရဲ့ Co-Director ကြီးပါ။ ကိုယ်​တိုင်​ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အထိ ထက်​မြက်​သူ​လေးပါ။ …. Read More